Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: 2017
Ofiin ofbulchuu fi Dimokraasii Hidhamaa
Dr Milkeessaa Miidhagaa
Biyyi tokko sirna federaalawaan bulti yoo ta’e naannoleen ofiin ofbulchan (self-rule) ni jiru jechuudha. Ofiin ofbulchuu jechuun naannoleen aangoofi itti-gaafatamummaa heeraan ragga’eef irratti eeyyama eenyuus utuu hin gaafatiin, murtoo eenyuus utuu hin eegiin hojiirra oolfatu. Seera baasu, hojiirras ni oolchu! Hooggansi naannoo itti-waamamni isaa qaama seera baaftuu naannoof [Caffeef] ta’a. Caffeen naannootis birmadummaa qaba uummataan waan filatamaniif, aangoo heeraan kennameef irratti seeraa baasee hojiirra waan oolchuuf. Aangoo isaa irratti Naannoon murtee xumuraa [final decision] kenna. Mootummaan Federaalaa aangoofi murtee naannoo keessa hin seenu. Egaa kun akka yaad-rimeetti waan haasofnudha.
Biyyi keenya heera federaalawaa qabdi, naannoleenis ijaaramaniiru, garuu naannoleen akka ofiin of hin bulchine danqaa baay’eetu jala kaa’ame. Danqaalee baay’ee keessaa tokko sirnaa, caasaa fi adeemsa siyaasaa Addi Dimokraatawaa Warraaqsa Uummattoota Itoophiyaa (ADWUI)n murteewwan jajjaboo fi imaammata biyyaa baasuuf hordofu, dimokraasii hidhamaa (democratic centralism) waan jedhamudha. Dimokraasii hidhamaa keessatti, hooggantoonni mirga walfalmuu fi wal amansiisuu waltajjii siyaasaa isaanii irratti ni qabaatu. Hundaa’ol immoo paartiin nama hundaaf yaadee, murteessafi jedhameetu fudhatama. Miseensonni mana marii bulchitoota biyyattii garaa garummaa ejjennoo qabaachuu ni danda’u waltajjicha irratti. Achii gadi bahanii garuu akka waan tokko ta’aniitti muldhatu, murtees hojiitti hiiku. Murteen gara oliitti murtaa’e, sadarkaa sadarkaadhaan irratti mariin godhameetu bakka hundatti hojiirra oola. Ilaalcha hooggansi olii hin dogoggoru jedhu qaba. Akka Itoophiyaatti hooggantoonni naannoolees waan gidduutti waliin murteessan ykn [haala kanaan duraatiin waan itti himame] sana hojiirra oolchaa turani. Kanaafuu, mirgi ofiin ofbulchuu fi dimokraasiin hidhaa waliif faallaadha. Dimokraasii hidhaan aangoo heeraan naannoleef kenname irraa mulqa. Kanaafi waggoota 26n darban mirgi ofiin ofbulchuu heeraa biyyattiitiin naannoleef ragga’ee ture kan gaaga’ameef.
Gaaffiin warraaqsa Oromoo inni tokko mirga ofiin ofbulchuuti. Mirga ofiin ofbulchuu naannolee fi hojiirra oolmaa sirna federaalizimii Itoophiyaa wanniin danqan keessaa tokko dimokraasii hidhamaa [democratic centralism] paartiin biyya bulchaa jiru hordofu ta’uu isaa ogeessonni federaalizimii Itoophiyaa irratti waliif galu. Gama kanaan gaaffii Oromoo –ofiin ofbulchuu- deebisuuf, paartiin biyya bulchu sirna, adeemsaa fi caasaalee dimokraasii hidhamaa kana kan waggaa 26f hojiirra ture ofirraa dhaabuu qaba.
Waggaa darbe kana keessa, bulchiinsi Obbo Lammaa sirnaa fi adeemsa dimokraasii hidhamaa kana cabsuudhaan, uummatatti makamuudhaan, afaan uummanni dubbatu dubbachuudhaan, gaaffii uummataa deebisuu eegalani; haala dur hin baramneen koree hoji-raawwachiiftuu ADWUI irrattis dhiibbaa gadhani. Murtee dimokraasii hidhamaa kana cabsuutu heera biyyattiif wabii ta’a; mirga ofiin ofbulchuufis wabii ta’a; biyyattiis gara dimokraasii dhugaa fi tasgabbii waaraatti geessa.
Posted by Hasan Ismail at 10:13 AM No comments:
Harrichi Wayyaane Haylamaaram galgala kana ibsa rakkoo Harargee Lixaa -
Harrichi Wayyaane Haylamaaram galgala kana ibsa rakkoo Harargee Lixaa
Harrichi Wayyaane Haylamaaram galgala kana ibsa rakkoo Harargee Lixaa Aanaalee Daaroo Labuufi Hawwii Guddinaa keessatti obboleeyyan keenya Soomalee waajjira Poolisii keessatti ajjefaman jedhe. Kuni kijiba adiidha. Miskiinnan ajjeefaman kun makkalakaayaan mana isaaniitii guuree bakka Hadraa Sheek Usmaan ykn Hoyyo aamin jedhamu kaayee, ajjeechaan kun raaw'atamuu guyyaa tokko dura dhiisee biraa deeme. Magaalaa Gaadulloo waajjirri poolisii humaatuu hin jiru.
Wanni waajjira poolisii maqaa dhayuuf poolisii Oromiyaa kan ajaja isaanii diddee aantummaa ummataafi mootummaa naannoo filatte maqaa balleessuufi. Hin milkaayan abadan!
This evening puppet minister Hailemaramiam Desalegn claimed Somali's were killed in POLICE STATION in Gadullo town of West Hararge. He is deliberately lying to fit a narrative TPLF is building to attack Oromia Police and regional government. Those civilians were killed in warehouse used as place of worship and storage known as Hadra Shek Usman or Hoyyo Amina. They were collected from their home and placed there by the military which left them defenseless while they and local elders were begging. In fact there is NO police station in Gadullo town.
Posted by Hasan Ismail at 3:00 PM No comments:
Adeemsi Keenya Garamitti?
Akkuma wellisaan keenya Haacaalun jedhe Qabsoon Oromoo Arat Kiiloo seentee jirti. Akkuma namni hundi argaa jirutti Wayyaaneen dhaabuma ADWUI/ EPRDF kanuma biyya ittiin saamudhaaf ijaaratte keessattuu o'aantummaan siyaasaa ishee cabee rakkoo hamaa keessa jirti. Ol’aantummaa siyaasaa dhabde kana deeffachuudhaaf immoo tarsiimoo garagaraa fayyadamaa jirti. Haaluma kanaan Qabsoo gaggeeffamaa jiru dirree siyaasaa keessaa gara dirree waraanaa ( from political sphere to security) geessuudhaaf yaalii godhaa jirti.
Yaaliin ishee kuni garuu hamma ammaatti hin milkoofne. Rakkoo kana keessaa bahuudhaaf ji’a tokkoofii walakkaa oliif walgahii teessus furmaata dhabdee jirti. Walgahii koree Hoji Raaww'achiiftuu ADWUI/ EPRDF doorsisaan eegaltus akka feetetti nama jilbiiffatuuf argachuu hin dandeenye. Kanaafuu ammas dubbii dirree siyaasaa keessaa baasuun gara dirree waraanaa geessuuf wixxifataa jirti. Erga Lammaa Magarsaa ajjeechaa waraanni raaw'ate balaaleffatee seerummaa dhabsiisee as daranuu maraattee jirti. Yakka waraanni ishee raawwate kanaaf sababa uumufis Harargee Lixaa Daaroo Labuufi Hawwii Guddinaatti ummata nagayaa ficcisiiftee jirti.
Guyyoota itti aananitti walgahiin ADWUI/ EPRDF kun gara tokkotti bahuun isaa hin oolu. Itti bahiinsa tilmaaman keessaa;
1) TPLF doorsisaafi sossobbiidhaan yaada ishii fuidhachiisuun qondaalonni Oromoofi Amaaraa jajjaboo tahan sababa muudama ool'aanaatiin akka naannorraa ka'an godhuu malti. Odeeffannoon hanga ammaa qabnu akka adeessutti garuu karoorrri isaanii kuni waan milkaayaa jiru hin fakkaatu garuu dhibbaa dhibbatti jala muruu hin dandeenyu;
2) Sossobbiifi doorsisin ishii walgahicha irraa waan barbaaddu yoo argamsiisuufi baate suduudaan gara humnaa deemuu malti. Kanaaf ammoo qophii xumurtee jirti. Poolisifii federaalafii waraanaaf leenjii ololaa farra Oromoofi Oromiyaa ta'e ji'oota dabran keessa kennuun baay'inaan bobbaaftee jirti. Tarkaanfiin humnaa kun sadarkaa xiqqaatti hayyama mootummaa naannootiin alatti Oromiyaa too'annaa waraanaa jala galchuu yoo ta'uu sadarkaa hammataatti ammoo mootummaa Oromiyaa guututti aangorraa buusuu ta'uun ni mala;
Waan hundaafuu Oromoon tarkaanfii itti baha lamaan armaan olii kana irra aanuuf ammumarraa itti qophaayuun barbaachisaadha. Haaluma kanaan;
- Qondaalota Oromiyaa amma jiran kaasuun kittillayyoota kan fiddu yoo taate jarreen muudaman akka ishiin faanaan lafa hin geenya godhuu feesisa;
- Humna waraanaa waliigalaatin biyya qabattee wareegama guddaa gaafatus irra aanuun ni danda'ama. Kanaaf ammoo humni waraanaa sirnichaa akka haphatuufi fi hanqatu tooftaalee gargaaratitti fayyadamuu barbaachisa;
Hubadhaa: Mootummaan kamiiyyuu humna qofaan ummata bulchuu hin danda'u. Wayyaaneen Oromiyaa hanga har'aa kan bulchite paartii DHDUOfi caasaa ( birokraasii) MNO fayyadamuudhaaniifi ummata Oromoos doorsisuufi abdii kutachiisuudhani. Ummanni Oromoo dadammaqiinsaafi tokkummaa ajaa'ibaa irra gaheera. Kanaafuu ammaan achi doorsisaafi qoqqoddiidhaan bituu hin dandeessu. Caasaan lamaan ( DHDUO fi MNO) kun yeroo ammaatti harki guddaan gara ummataa goreera. Hojiin keenya caasaan kun daran ummataan walsimataa akka deemu gochaa lukkeelee ammas alagaan gabroomuudhaan ummata miidhuu barbaadan haphisuuf dhabamsiisuu barbaachisa. Yoo Wayyaaneen kan humnaan daran kan deemtu taate tooftaalee deeggarsa kennuu dhabuu/ noncooperation/ fayyadamuun caasaan lamaan faaydaa akka ishiif hin kennineefi qabsoodhaaf haala akka aanjessu gochuu irratti hojiin dalagamaa jiru jabaatee itti fufuu qaba.
Itti bahiinsa walgahii kanaa ofirratti caqasaa qophiin humna ofii jabeessuu itti fuffuu qaba. Hojii torbanoota dhufu hojjataman keessaa kan duraa falmaan tun akka Wayyaneen barbaaddu dirree siyaasaa keessaa baatee kan waraanaa akka hin seenne taasisuuf tooftaalee qabsoo nagayaatiin ijibbaata gahuun itti fufuu qaba. Waluma faana ammoo yoo dubbiin dhiibdee falmaan dirree siyaasaatii baatee battala waraanaa seente, humna keenya gama maraan jabeeffachuu gaafata. Kanarrattis hojiin eegale jabaatee itti fufuu qaba.
Ammaaf wantootni of eeggannoo gochuu qabnu kanneen asii gadiiti;
- Qondaalonni ol'aanoon ol'aantummaa siyaasaa qaban daran jabaachuun tumsa horachuu itti fufuu qaban. Heeraafi seera jarri ummata cunqursuuf baafattee itti gargalchuun afaanfajjii itti uumuun itti fufuu qaba. Yaalii ishiin waltajjiilee keessaa dhiibdee baasuuf gootu kamiiyyuu diduun waltajjii irratti ol'aantummaa bilchina yaadaafi onneetin itti fufuu qabu.
- Qaamni bulchiinsa olii hamma gadiitti ummata mariisisaa hojii idilee itti fufuu qaba. Waluma cinaatti ammoo yoo tarii jarri qondaalota ol'aanaa humnaan kaasuutti deemteefi bulchiinsa naannichaa dhuunfatutti deemte tarkaanfii bulchiinsa laamsheessuu fudhachuuf qophaahuu qaban.
- Qaamonni nageenyaa Oromiyaa hojii ummata waliin tahuun tasgabbii eegsisuu cimsuu qaban. saboota nu keessa jiraniif xiyyeeffannaa addaa gochuun nageenya isaanii mirkaneessuun hedduu barbaachisaadha. Kana keessa hawaasa kanneen waliin hariiroofi marii cimaa gochuun shakkii keessa akka hin galle abdii kennuufi barbaachisa. Waluma faana humnaafi qophii ofii cimsuun barbaachisaadha. Hanga dubbiin gara tokkotti baatutti hariiroon Agaaziifi poolisii federaalaa waliin jiru abshaalummaafi cimina guddaa gaafata. Yoo isaan nama xuqan malee itti bu'uun hin barbaachisu. Yoo mirgaafi aangoo bulchiinsa naannoo dhiiban ammoo ejjeennoon dura dhaabbachuun barbaachisaadha. Kana keessaa hidhamtoota ajaja mana murtii malee Oromiyaa keessa akka hin baafne dhoorguun, konkolaataafi qabeenya naannoo akka hin fayyadamne dhoorguunifi doorsiisa ummatarraan gahan dhoorguun barbaachisaadha.
- Barattoonni sadarkaa ol'aanaa hundi mooratti deebi'uudhaan mooraalee dirree qabsoo yaadaafi mormii gochuu qaban. Akkuma yeroo heddu jenne barattoonni yunivarsitiilee yeroo ammaatti mooraa yoo turan qabsoo irra gargaaran. Barattoonni sadarkaa duraafi lammaaffaas barnoota isaanii guututti addaan kutuu hin qaban. Dareetti deddeebi'uun gorsaafi qajeelfama barsiisota irraa fudhachuu itti fufuu qabu.
- Ummanni bal'aan hojii wal dammaqsuufi wal ijaaruu adeemsifamaa jiru daran cimsaa dhimmoota yeroo irraa gara yerootti dhufan irratti hoggansa ofii dhageeffachaa adeemuu qaba.
Walumaagalatti Wayyaanen waanuma feetes gootu qabsoo Uummata Oromoo sadarkaa isheen cabsuu dandeettu bira dabree jira. Kanaafuu qaamoleen armaan olitti eeraman hundi isaanii ciminaafi qindoominaan hojjachuun, yoo isaan kan humnaanis ofdura adeemuf kan yaadan ta’e
Oromiyaa guutuu keessatti sochii bulchiinsaafi diinagdee laamshessuudhaan karoorri ishiin humna waraanaa fayyadamuudhaan ol'aantummaa dirree siyaasaa deebiftee dhuunfachuuf gootu akka fashalu gochuun ni danda'ama.
Waa Hundaafuu qabsoon bakka murteessaa geessee jirti. Wal caqasaa deemna. Odeeffannoo argannus jala jalaa waliin gahaa deemna.
Posted by Hasan Ismail at 1:42 PM No comments:
The TPLF army continues to cause death and destruction in Oromia.
Two days ago, the newly deployed army members have left unannounced, leaving the Somali civilians in the warehouse where they instructed them to stay put. Elders of the area have stopped the military caravan and asked them why they were leaving the Somali civilians after isolating them from the local population and exposing them to danger. The military commander said that they had leave because 'you president [Lemma Megersa] said so and the Somali civilians have refused to leave . The elders asked the commander if they could go to talk to the Somalis at the warehouse and support them. But he warned them not to dare get there.
Sadly innocent civilians are paying the ultimate price. The TPLF is playing with the souls of Oromo and Somali civilians to ensure its grip onto power. Killing of civilians by any force must be condemned in the strongest of terms possible. As TPLF has pulled its last card of instigating a civil war among different ethnic groups, authorities in all regional states' in Ethiopia must beef of their internal security to protect all communities. Oromia regional government in particularly must step up protecting of the diverse communities under its jurisdiction. It must continue to set an example by investigating, apprehending and punishing any and all who are involved in instigating and attacking civilians of any background.
WE SHOULD ALL SAY NO! TO SUCH DEVILISH AND DESPERATE MACHINATIONS OF THE TPLF!!
Posted by Hasan Ismail at 12:30 PM No comments:
Seenaa gabaabaa Kantiibaa magaalaa Shaashamannee Aadde Xayibaa Hasan
Hawi - Anole
Filannoo bara 2005 (1997) irratti Paartiin Siyaasaa Qinijjit ADWUI garmalee sochoosee ilkees irraa buqqisee ture. ADWUIn yeroo sana qophii cimaa godheera, kan anaan dorgomee na injifatu hin jiru jedhee xinnaatus biyyattii Dimokraasidhaaf banuu isaatiin hammam Uummatichi akka isa jibbu bareera. Tarsiimoo hamtuu Muummichi Ministeeraa yeroo sanaa Obboo Mallas Zeenaawii milkooftee warri Qinijjitis adda faffaca’ee daaraa bubbeen fuute ta’an. Yeroo sana irraa eegalee Mallas ijaaf harka isaa Oromoorraa kaasee xiyyeeffannaa isaa Amaararratti godhe. Oromiyaa immoo jaala qabsoo isaa Jeneraal Abbaa Duulaa Gammadaatti amaanaa kennate. Abbaan Duulaatis bilisummaadhaan Oromiyaa hogganuu eegale. Waggoota muraasa keessattis tarsiimoo garagaraa baafachuudhaan wantoota gaarii hojjachuudhaan Uummata biratti fudhatama argachuu eegale. Tarsiimoolee inni ittiin socho’aa ture keessaa tokko DHDUO dargaggomsufii hayyoomsuu ture. Tarsiimoo kana gara hojiitti hiikudhaafis xiyyeeffannaan isaa dhaabbilee barnoota ol’aanoo irratti ture.
Haaluma tarsiimoo sanaatiin Yunivarsitiiwwan Hunda keessatti Qindeessitoota DHDUO ( dallaa keessattiifii alattis) ramaduudhaan barattoota Oromoo gara miseensummaatti akka hawwatan godhuu eegale. Hamma hojiin kun bal’inaan eegale sanattuu barattoota Oromoo biratti DHDUOn akka gantuu, hattuufi ergamtuutti ilaalamaa ture. Tarsiimoon kuni akka fiixa bahuuf karoorri lafa kaawame garuu salphaa hin turre. Karroora lafa kaawwaman keessaa tokkoffaan Ramaddii Hojiiti. Inni lammaffaam immoo ganna ganna walgahii isaanii irratti hirmaachudhaan qarshii hedduu argachuudha. Barataadhaaf isaan kunneen waan ijoo turan. Kanumaaf suuta suutaan barattoonni waljalaa luqqa’aa gara miseensummaa DHDUOtti dhufuu eegalan. Adeemsi kuni hamma DHDUOn Dhukkuba Daddarbaa Uummata Oromoo jedhamee waamamu tokko gaye.
Yeroon dhukkubichi akka belbela ibiddaa faca’u sana Anaafii Aaddee Xayyibaa Hasan Yunivarsitii keessa turre. Wanti adda nu godhu tokko yoo jiraate Yunivarsitiin ani itti barachaa ture Haramaayaa ta’uu isaafii kan isheen itti barachaa turte Goondar ta’uu isaa qofa. Aaddee Xayibaan Yunivarsitii Gondarittan baradha jettee guyyaa tokkos akka yaaddee hin turre waanuma wal nama shakkisiisu hin qabu. Jireenya ishee keessaattis hanga guyyaa barumsaaf riqicha Abbaay qaxxaamurte sanatti jireenyi ishee waaggoota murtaa’aniifis ta’u handhuura Uummata Amaaraa sana keessa ni ta’a jettee waan yaaddes natti hin fakkaatu.
Isheedhaaf garuu Oromiyaarraa fagaachuunshee daran Oromummaa ishee akka cimsattuuf carraa addaa baneef malee Oromummaashee irraa hin mulqine. Yeroo muraasa keessatti muummeen ishee ( Sooshiyookoojiin)nis ta’ee eddoon isheen geette hundi foolii Oromummaa nama hawwaduun akka guutamu goote. Akka namoonni qaamaan sirriitti ishee beekan dubbatanitti eddoo isheen geesse hundatti Oromummaatu calaqqisa, Oromummaatu leellisa, sabatu boona. Yeroos biiftuu calaqqistuu Oromummaa Yunivarsitii Goondar turte. Isheef Oromummaan jireenya isheeti, boontuu Oromoo sabboonummaan lafee keessa seene akka taate hundatu beeka. Miidhaginni Uumamaa Rabbiin kenneef immoo daran eenyumayyuu biratti akka jaalatamtu kan godhe ture.
Hammuma fedhe miseensummaan DHDUO akka dhibee qufaa saffisaan daddarbaa turus yeroo sana, haaluma sana keessattuu Miseensa DHDUO ta’uun Uummata Oromoo ganuudha, Oromummaa ofirraa mulqanii gatuudha. Namni miseensa isaanii ta’e hunda biratti tuffatama. Kan miseensa isaanii ta’es kana waan beekuuf dhokateet akka namni hin arginetti luuxee waajjira DHDUO qunnama. Namni tokko isa arge taanaan akka balfaatti ofirraa maqfama. Hagasuma, Oromummaansaas gaafas biyyoo lixxi ( Adaduma Namni isaanitti makamu dabalaa adeemaa tureen miirrifi ilaalchi akkasii garuu xinnaachaa dhufee ture). Inumaa dubbiin faallaa adeemtee namni miseensummaa DHDUO fudhachuu dide akka farra biyyaa, farra nageenyaafi farra dimokraasii ta’eetitti ilaalamuı eegalees ture. Haalli suni immoo Sabboontota akka Xayibaatiif gaarii hin turre. Haa ta’u malee sodaas ta’ee faaydaa isheetiif jecha DHDUO hin mil’anne ~ sabboonummaa ishees hin tuffachiisne. Osoo eejjannoo ishee kanarraa hin sosso’in hamma waggaa sadaffaa geesse.
Eebbifamuudhaaf baatiin muraasni yeroo ishee hafu wanti isheen hin eegin tokko uumame. Innis akkana ture ~ tasuma osoo isiin itti hin yaadin qindeessittoonni DHDUO dallaa sana keessa jiran waamanii, har’aan achi ati Miseensa keenya adda dureedha jedhaniinii maqaa ishee DHDUO qabsooftuu hangafa jechuudhaan tokkoffaarratti ishee galmeessanii leenjiidhaaf gara Adaamaatti dabarsan. Ijoolleen yeroo sana dallaadhaan alaafii keessaa DHDUO qindeessaa turan keessoon ishee miseensummaa isaanii akka hin fudhanne haa beekan malee ejjannoof sabboonummaan Oromummaa ishee qisaasamee akka bilaashatti hin hafne ijoollee cinqamtu turte. Sababa sabboonummaa ishees gufuum akka ishee hin arganne warra sodaatan turan. Ijoolleen suni namoota akka ishee dirqiidhumaan maqaa galmeessanii gara waajjira jiddugaleessaatti erguu isaanii ijoolleen morman hedduu turan. Kanneen komii dhiyeessan ijoollee fedhii dhuunfaa isaanii kabajiifachuuf waggoota sadiihiifi sanii oliif waajjira DHDUOtti deddebi’aa turaniidha.
Akkuma eebbifamtee xinnooshee bubbulteen waamicha miseensota DHDUtiif godhameen leenjii warraaqsa dimokraasummaatiif gara Adaamaa imalte. Yeroo sana warri DHDUO waajjira jiddu galeessaa irraa qindeessaa ture Obboo Aaddisuu Araggaafaa, Obboo Zalaalam Jamaanah faa turan. Sabboontuu akka Xayibaa Hasan gara miseensummaatti fiduu isaaniitiif qindeessitoota Yunivarsitii Goondar galateeffatan. Akkuma leenjicha xumurteen Finfinneetti hojii eegalte, ergasiis itti Gaafatamtuu Waajjira Dhimma Dubartii Magaalaa Sabbataa taatee muudamte. Eddoo sanarra waggoota afuriif erga hojjatteem booda gara Caffee Oromiyaatti Olguddachuudhaan jalqabarratti waggaa tokkoof itti aantuu, ergasii immoo Itti Gaafatamtuu Dhimma Dubartoota Oromiyaa taatee Muudamte. Eddoon suni yeroo dheeraadhaaf Aangoftuu DHDUO Aaddee Sa’idaa Kadiirin kan qabame ta’uu isaatifii muuxannoof gahumsi ishees ol’aanaa sila tureef eddoo sanaa Sa’idaa kaasanii Xayibaa ramaduun namoota tokko tokkoof kan liqimfame hin turre. Ta’us waajjiricharra nama yeroo dheeraaf ture dabalataan irra tursiisuurra nama haaraa, ilaalchafi humna hoo’aa qabu ramadamuun kan isaan gammachiises hedduu turan.
Eebbifamtee yeroo gabaabaa keessatti aangoo ol’aanaa kanarra erga baateen booda jijjiirama akkamii waajjiricha keessatti fiddi laata kan jedhu nama hedduu biratti kan hawwiidhaan eegame ture. Ta’us garuu aangoo sanarra bubbuluudhaaf carraa osoo hin argatin Qilleensi waajjira Pirezidaantiitti bubbisee Jeneraal Abbaa Duulaa Gammadaa Jaal/ Alamaayyoo Atoomsaatiin geeddare Aaddee Xayibaa Hasanis eddoo sanaa kaasudhaaf yeroo itti hin fudhanne. Carraan ganamaan argattetti fayyadamuudhaaf hiree gahaa osoo hin argatin aangoo irraa kaafamtee. Sana booda eeddoo kamirra akka hojjachaa turte sirriiti hin beeku ( Ekspartii taatee biiroodhuma sana keessa hojjachaa akka turte nan shakka). Barumsa Maastarsii barachaa akka turtes nan yaada.
Erga Prezidaantiin Jijjiiramaa Obboo Lammaa Magarsaa gara aangoo dhufee as Kantiibaa Magaalaa Shaashamannee ta’uudhaan muudamte. Yeroo gabaabaa keessattis waan kanaan dura kantiibaan magaalatti hedduun sodaachaa ture sodaa tokko maleen itti seentee maandhee hannaa dhiiga Oromoo xuuxudhaaf ijaarame diiguu eegalte. Diina lammii ajjeesee akka dur laphee dhiibee bashannanuuf karoorfate jilbiiffachiistee murteef dhiyeessitee murtee haqaa argachiiste. Hojii ishee kanaanis qaamota hedduu, keessumattuu Uummata Oromoo irraa jaalalaafi kabajaa guddaa argatte.
Walumaagalatti seenaan gabaabaan Aaddee Xayibaa Hasan kana fakkaata. Kaleessas sabboontuu, har’as sabboontuu, borus sabboontuu sabaa akka taatu abdiin kan koo guddaadha. Dhumarratti seenaa dhugaadhaan na bira gahe tokko isiniif haa qoodee nagaa isinitti dhaammadhuu::))
~ Akkuman gubbaatti jedhe yeroo keenya sana nama dallaa keessatti waa’ee DHDUO waan gaarii dubbatu sabboontonni yeroo itti eeggatanii dhukee irraa kaasaa turan. Achuma Yunivarsitii Goondaritti guyyaa tokko saboontonni Oromoo mucaa miseensummaa DHDUOtiin of jaju, kan basaastota wayyaaneetiiff ergamee ijoollee keenya maqaa xureessee egeree isaaniitti gufuu ta’aa ture tokko qaban. Gorsas laataniifii gocha isaa kanarraa akka qusatu itti himan. Inni garuu sirrumatti cuuphameera sila ta’eef gorsa isaanii sana tuffatee ijoollee sana doorsisuuf kajeele. Ergasii sabboontonni kuni mala malanii, guyyaa tokko gamtaadhaan qabanii tumanii, lafarra gangalchanii dhukkee irraa kaasan. Mucichi garuu kan harka kennu hin turre. Eddoo itti tumamee suutuma oljedhee ~ Duras beeka ture, Gooftaa Iyyasuus akka sirriitti na jaallatu har’uman sirriitti addaan baafadhe jedhee ture. Maali jennaan? Ammaan achi DhDUOn aarsaa ani kanfale kana gatii keessa galchuudhaan ramaddii miidhagaa naaf laachunshee hin oolugaa jedhe jedhama:
Posted by Hasan Ismail at 4:39 AM No comments:
Waliigaltee Hawaasawaa. mirgoota Oromoo fi haaromsa DhDUO
Waliigaltee Hawaasawaa | mirgoota Oromoo fi haaromsa DhDUO:
Sirna siyaasaa keessatti hundeeffamni waliigaltee hawaasawaa [social contract] bu'uura aangoo siyaasaa mootummaa ti. Waliigalteen hawaasawaa qaamota lama qaba. Qaamni tokko qaama abbaa mirgootaa ta'e, kan mirgoota dabarsee kennuu dha. Qaamni kun uummata. Ilaalcha kana Heera Mootummaa Federaalaa keessatti uummanni abbaa aangoo birmadummaa akka ta'e ni raggaasisa; keewwata 8(1). Heera Oromiyaa keessattis uummanni Oromoo abbaa taayitaa ol'aanaa mootummaa naannichaa akka ta'e hammatameera; keewwata 8. Qaamni lammaffaan immoo qaama bulchiinsaa, kan aangoo fudhatu dha. Qaamni kun immoo mootummaa dha. Akka waliigaltee kanaatti, mootummaan bakka bu'aa uummataa mirgoota isaa eeguu fi raawwatuuf itti kenneeti. Yaad-rimeen kun Heerota Federaalaa fi Oromiyaa, duraa duuban keewwata 8(3) fi gaalee lammaffaa keewwata 8, keessatti caqafameera.
Walharkaa fuudhinsi fi milkaa'uun waliigaltee hawaasawaa qabiyyee mirgoota kennamuu, fedhii guutuu qaamolee lamaanii fi daandeettii raawwii qaama aangoo fudhatu irratti hundaa'a. Qabiyyeen waliigaltee hawaasawaa mirgoota namoomaa, mirgoota waloo seenaa, teessumaa fi bulchiinsa siyaasaa dabalata. Waliigalteen kun fedhii guutuu uummataa irratti hundaa'e fi karaa bilisaan mirgoota uummataa mootummaatti dabarsa. Mootummaan waliigaltee hawaasawaa fudhate mirgoota kanneen kabachisiisuf waadaa qaba. Mootummaan waadaa kana hin eegu taanan uummanni yeroo kamittuu mootummicha kaasuf aangoo guutuu qaba; Heera Federaalaa keewwata 12(3) fi Heera Oromiyaa keewwata 12(2).
Uummanni Oromoo seenaa, teessumaa fi bulchiinsa siyaasa guutuu fi guddaa qaba ture. Tirannaa yeroo keessatti seenaan, teessumni fi bulchiinsi siyaasaa Oromoo gara laafinaa uummatichaa fi dhiibban irraa fudhatameera. Ergasii asitti Oromoon seenaa, teessumaa fi bulchiinsa siyaasaa guutuu fi guddaa hin deebifanne.
Haalli hundeeffama DhDUO beekumsa uummataati. Warri hin beekne yookin hin amanne kitaaba 'ሉዓላዊነትና ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ፥ 5ኛ ዕትም፣ 2008፣ ገብሩ አስራት' hundeeffama DhDUO dubbisuu danda'u. Ta'us, mirga Oromoo nan kabachiisa jechuun aangoo mootummaa Oromiyaa waggoota 25 oliif harka godhateera. DhDUOn dhadhabbina waliigaltee hawaasawaa raawwachuu akka qabu, rakkinni bulchiinsa gaarii akka jiruu fi mirgoota uummanni itti kenne kabachisaa akka hin jirre amanuun ofin haaressa jedhee abdii kenne. Haaromsi DhDUOn fudhate dubbii babbareedoo fi seenawaa dubbachuu, warraaqsa diinagdee hanga aangoo bakka bu'ummaan itti kenname kan sadarkaa Federaala irraa qabu gadhiisuu akkasumas qeerroo muudutti ga'eera. Kunneen gaarii yookin balleessaa dha.
Haaromsi DhDUOn jalqabe bu'aa qabsoo uummatichaa ta'uunis dagatamuu hin qabu. Haaluma walfakkaatun, qabsoon Oromoon seenaa, teessumaa fi bulchiisa siyaasaa dhabe deebifachuuf jalqabe itti fufeera. Himoota lamaan irraa wanti hubatamu yoo jiraate gama tokkoon DhDUOn abdii haaromsaan jira. Gama biraan uummatichi mirgoonni bakka bu'ummaan dabarsinee kennine hin kabajamne, raawwin waliigaltichaa hin jiru jedhee qabsoo kallattiin itti fufeera. Qaamolee lamaan gidduu iddoon duwwaa akka jiru beekameera. Sababoota rakkoo kanaa keessaa:
1. Yeroon DhDUOn aangoo siyaasaa fudhate, yeroo uummanni Oromoo mirgoota seenaa, teessumaa fi bulchiinsa siyaasaa dhabetti waan tureefi. Uummanni mirgoota hin qabnee fi DhDUOf hin dabarsine DhDUO irraa eeguu isaa ti.
2. Jalqabumaa uummanni Oromoo DhDUO waliin waliigaltee hawaasawaa hin qabu. Bakka waliigalteen hawaasawaa hin jirreetti, uummanni raawwii waliigaltichaa DhDUO irraa eegun seerummaa hin qabu.
3. Yookin, waliigalteen hawaasawaa Oromoo fi DhDUO gidduu jira yoo jedhame, bakka bu'ummaan DhDUO fedhii guutuu fi bilisaa uummata Oromoo irratti hin hundoofne.
Haaromni DhDUO mirgoota Oromoof abdii erga hin taanee qabsoo uummataatti gufuu fi qancarsa ta'uu hin qabu. Akka furmaatatti:
1. Hunda dura, uummanni Oromoo mirgoota gara laafinaan fi dhiibban dhabe kallattiin deebifachuu qaba. Mirgoota jaarraan dura harkaa fudhatame maqaa haaromsaan DhDUO irraa eegurra, kallattii fi nagayaan qabsoo mirgoota seenaa, teessumaa fi bulchiinsa siyaasaa deebifachuu itti fufuu qaba.
2. Mirgoota qabsoo kallattiin deebifateen waliigaltee hawaasawaa haaraa fedhii guutuu fi bilisa irratti hundaa'e raawwachuu dha.
3. DhDUOnis haaromsa kopaa godhu irra qabsoo uummanni mirgoota isaa deebifachuuf taasisutti of makuun haaromsa dhugaa godhachuu qaba.
Posted by Hasan Ismail at 12:38 PM No comments:
Xalayaa banaa PMNO Obbo Lammaa Magarsaa bulchiinsa MNOtiif
Akkuma beekkamu yeroo hedduu qeerron Oromoo waamicha isin nuuf gootan dhageenyee isin waliin dhaabbachaa turre. Ammallee isin waliin dhaabbachaa jirra. Walis dhageeffachaa jirra. Haa tahu malee yeroo ammaa waraanni makkalaakayaa fi federaalaa ilmaan Oromoo irratti bobbaafamee daangaa Oromiyaa cabsee lammii keenya lafarraa duguugaa jira. Barattoonni Oromoo yuunivarsitii yeroo nuti adeemsa heera fi seerri eyyamuun baanee ajjeechaa hammaataa ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru morminu waraanni nurratti bobbaafamee mooraa keessa akka hin jiraanne nu gochaa waan jiruuf tokkummaan mooraa yuunivarsitichaa gad lakkisnee bahuuf dirqamnerra. Lubbuun obbolaa teenyaa guyyaa guyyaan osoo dhumtu mormii dhaabaa jechuun fudhatama hin qabu.
Amma yeroon Oromoo sobanii fi sodaachisan darbeera. Ummata miliyoona shantama qabattanii yoo gaaffii mirgaa gaafachuuf mormii gaggeessine #Commandpost nurratti labsama jechuun sodaa ummata keessatti uumuf yaadun kana booda fudhatama hin qabu. Commandpost bakka BMNO hin fudhannetti hanga fedhe yoo labsamellee hojirra ooluu hin dandahu ummanni Oromoo gamtaan ofirraa deebisaa. Ummanni Oromoo jumlaan dhumaa jira. Kana caalaa waraanni nuti sodaannu hin jiru lubbuun Oromoo daranuu dhumaa jirtii.
KPMNO obbo Lammaa, qeerro fi ummanni Oromoo guutun si jaallateera. Ummata kee sijaallatee si cinaa hiriire kanatuu guyyaa guyyaan dhumaa jira. Qeerron Oromoo rakkoole fi gaaffilee hundaa boodatti dhiisnee obsaan isin dhageeffachaa turreerra.Amma garuu lubbuun dhumaa waan jirruuf obsuu hin dandeenye. Osoo sabni keenya guyyaa guyyaan ajjeefamuu teenyee barachuu hin dandeenye.
Amma hatattamaan dhimmoonni deebii hatattamaa akka itti nuuf laattan barbaannu
1) Weerara daangaa hundaan wayyaanen ilmaan Oromoo irratti bantee ummata keenya fixaa jirtu poolisii, milishaa qeerroo fi ummata Oromoo hidhachiisun daangan Oromiyaa akka kabajamu ni gaafanna.
2) Waraanni makkalaakayaa fi federaalaa yoo affeerraa keessanii kan Oromiyaa weerare tahe maalif akka affeertan nuuf ibsaa. Yoo affeerraa keessaniin ala tahe hatattamaan nurraa baasaa.
3) Bulchiinsi yuunivarsitii gaaffii mirgaa gaafannuuf waraana nutti waamee nu reebsisaa jiru itti gaafatamuu qaba.
4) Kaabineen ilaalcha moofaa kaleessaa qabachuun waraana wayyaanee waliin ummata keenyarratti yakka raawwachaa jiran nurra haa kaafama.
5) Hidhamtoonni siyaasaa sadarkaa MNO jalatti hidhamii jiran hatattamaan hiikkamanii hidhaan yeroo ammaa gaggeeffamas jiru nurraa has dhaabbatu.
6) Ilmaan Oromoo 600,000 ol waraanni irratti bobbaafamee buqqifaman haa qubsiifaman.
7) Daangan Oromiyaa haa kabaamu.
8) Waraanni agaazii yuunivarsitii fi manneen barnootaa mandheeffate nurraa bahuu qaba. Waraanan ajjeefamaa jiraachuu hin dandeenyu.
Kana booda nuti qeerron Oromoo diina jala teenyee dhumuu hin barbaannu. Osoo ummanni keenya daangaa irraa dhumaa jiruu sammuu teenyee ittiin ilaallu hin qabnu. Ogummaa fi dandeettii qabnuun qeerron Oromoo hanga dhumaatti biyya keenya Oromiyaa irraa diina deebisuu waan babaannuf qeerron Oromoo akka nu leenjistan dhaamsa dabarfanna.Qabsoon itti fufa.
Posted by Hasan Ismail at 8:44 AM No comments:
Cuunfaa Marii Dhimmaa qormaata COC
Akkuma yaadattan kaleessa dhimma COC ilaalchisee akka mari'annu isin affeerreen ture. Haaluma kanaan yaadni ( comment) 300 ol kalayuun mariin gaariin godhamee jira. Gara inbox fi bilbilaanis barattoonni, barsiisonnifi qondaalonni dhimmi ilaallatu yaada nuuf laatanii jiru. Marii kanarratti hundaahuun yaada cuunfaafi furmaataa ta'a jedhee kanin yaadu akka armaan gadiittin dhiheessa.
1) Gahuumsa barattoonni akaakuu ogummaa leenji'anii saniif qaban madaaluuf barbaachisummaa qormaata COC irratti namni irra jireessi waliigala.
2) Haa ta'uu ammoo waa'ee qormaata kanaa dursanii barattoota osoo hin hubachiisniifi hin mari'achiisin labsuun sirrii akka hin taanes yaada hedduutu kenname. Barattoonni waa'ee COC osoo hin dhagayanin barnoota isaanii walkkaan gahan ykn xumurutti dhihaatan qormaata kanaaf akka taa'an gochuun sirrii miti.
3) Qormaata kana fudhachuun barbaachisaa ta'us yoo fudhachuu baatan ykn dabruu dadhaban digriin hin laatamu kan jedhus sirrii akka hin taaneedha. COC qormaata ga'uumsa ogummaa kan hojii seenuuf itti madaalaman malee kan madaallii eebbaatii miti. Ulaagaan digrii xumuruuf barbaachisu duraanuu lafa kaayamee jira ( number of credits, grades, papers, extensions etc). COC hojii seenuuf ulaagaa taha malee digirii xumuruufi miti. Biyyoota biraattis COC fi digriin wal hin qabatu. Kanaaf barataan tokko COC fudhatee fudhachuu baatee dabreefi kufeefuu erga ulagaa digrii isaa xumuree digriin isaa kennamuufi qaba.
4) Qulqullinni barnootaa biyyattii haalaan gadi bu'uun beekkamaadha, barattotas warra industiriis yaaddessaa jira. Barattonni turtii waggaa sadihii hamma shanii booda ugummaa itti leenji'aniin gahuumsaan akka bahan mirkaneessuuf qormaanni akka COC faaydaa qabaatus gahaa miti. Qulqullina barnootaa fooyyessuuf qilqullinni ( quality) baruufi barsiisuu fooyya'uun dirmaqa. Kana jechuun dhiheessiin meeshaa barnootaa ( kitaabota, laboratory) baay'inaafi qulqullinaanis dabaluu qaba. Barsiisota gahuumsa qaban ramaduufi gahuumsa isaanii yeroo yerootti leenjiin ol guddisuu barbaachisa. Barattoonni waggota 3 -5 mooraa turan keessatti barnoota isaanii sirnaan akka qayyabatan hordoffiifi deeggarsi godhamuufi qaba. Waliigalatti qulqullina baruuf barsiisuu osoo hin fooyyessin qormaata xumuraa ( exit exam) akka COC qofaan qulqullina barnootaa fooyyessinaafi gahuumsa barattootaa madaalla jechuun of sobuudha.
- Qormaanni kun barattoota duruu barnoota isaanii eegalanfi gara xumuraa dhihaatan irratti hojiirra ooluu hin qabu. Kanneen reefu eegalan ammumaan ibsi kennameefi akka bara barnootaaa isaanitti itti qophaayan gochuu feesisa.
- Ministeerri barnootaafi bulchiinsi yunivarsitiilee barattota waliin dhimma kanarratti marii bal'aa godhuu qabu. Mariin kun dhimma COC qofa osoo hin taane haala qulqullina barnootaa hammachaa deemaa jiru itti fooyyessan irrattis godhamuu qaba.
- Barattooni haala tasgabbaa'aafi qindaayaa ta'een gaafiifi mormii keessan dhageessisuun mirga heeraafi waaqnis isiniif laateedha. Adaba, naamusaafi tooftaadhaan itti fayyadama.
* Wannin irraa hanbise yoo jiraate armaan gaditti itti dabalaa daran bilcheessaa deemna.
Mari'atanii diina mar'achiisan!
Posted by Hasan Ismail at 5:45 AM No comments:
Konfaransiin Nageenyaa naannoo Soomalee waliin godhamuuf karoorfame jedha Dr Warqinaan
Konfaransiin Nageenyaa naannoo Soomalee waliin godhamuuf karoorfame jedha Dr Warqinaan... hanjamaa dhiisaa.
Gaafa duraas osoo taa'aa jennu Abdi Ilee waraana guddaaf qophaayaa jiru waliin waliigaltee nagyeenyaa mallatteessitanii of dagachiiftanii ummata ficcisiisftn. Ammas naannoo Soomalee wajjiin konfaransii nangeenyaa qopheessu dhiisii sadarkaa hoggansaatti waliin haasayuufuu haalduraa guutamuu qabu hedduutu jira.
1) Ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaayaman ammas naannoo san keessatti bakka buuteen isaanii hin beekamu. Kan hidhaman gadi lakkifamuu qaban, kan ajjeefaman addaan baafamanii reeffi isaanii maatiif kennamuu qaba.
4) Ummanni keenya buqqa'e bakka jireenya isaa deebisee itti jaarratutti qubachiifamuu qaba.
Osoo namni keenya bakka buuteen isaa hin beekkamiin, kan hidhami gadi hin lakkifamin, kan du'e hin awwaallamin, kan ajjeese seeraaf hin dhihaatin, qabeenyi saamame osoo hin kafalamin Abdi Ilee waliin konfaransii nageenya goona jechuun qosaadha. Gonkumaa fudhatama hin qabu. Abdi Ileen angorraa bu'ee seeraaf dhihaachuu qaba. Liyyu Poolisiin diigamuu qaba. Jeneraalonni Wayyaanee Abdi Ilee duubaan lola kana banan ni beekkamu, adabamuu qaban. Sun ta'uu baannaan naannolee lamaan jidduu nageenyi homaatuu hin jiraatu. Ammas lolli akkuma itti fufetti jira. Kanaafuu qoosaa kana dhiisaatii haldureelee kana goochisaa yoo dandeessan. Yoo dadhabdan ummatuma buqqa'e kanaayyuu qubachiisaa.Ummanni keenya ji'a sadi booddees mooraa baqaa keessan rakkachaa jira. Jala murree isinitti himna...kuni dhimma public relation miti. Dhimma lubbuu ummata kumaatamaati. Dhimma siyaasaa naannawa sanii tan fuulduraa irratti murteessaa ta'eedha. Kanaaf konfaransiinis ta'ee haasaan 'nageenyaa' Abdi ilee waliin godhamu kamiiyyuu haldureeleen kun ifatti guutaman malee hin ta'u!
Posted by Hasan Ismail at 6:44 AM No comments:
OROMOON SIRNOOTA MALEE SABOOTA IRRAA JIBBA HIN QABU.
Oromoon saba guddaa gaafa Afrikkaa qofa osoo hin taane guutuu addunyaatiif saba hangafaa tahuun wal nama hin mamsiisu. Hunda daran ammoo wanti saba kana adda godhu yoo jiraate gaarummaa, gara laafummaa, mataa isaarra nama jaalachuu, duuyda bal'inaa fi obsa qabaachuu isaa daran qoree fi qoorraas danda'ee sabaaf sablammii qorii takkatti waliin nyaachuu danda'uu isaati. Sabni kun saba naamusa qabu, saba eenyuuf illee jibba hin qabne tahuun ganama irraa keessoo dhiigaaf lafee isaatti galmeeffamee kan waliin uumame tahullee, baroota dheeraaf garuu dhugaan isaa kun dabee, inniis dhugaa fi ragaa isaatiis dhabee, maqaan isaa maqee maqaan haalaa fi amalaa, uumaa fi uumama isaa waliin wal hin simne, moggaasa eenyummaa isaatiin wal hin himne yoo itti moggaafamullee, yoo ittiin yaamamullee obseetuma cal'isee, hidhii ciniinnatee sirnootatti qabsaawaa hanga arraa gahe. Qabsoo maqaa isaa kan xurree irraa maqee fi cilee gurraatti warroonni saba kanaaf jibba qaban itti haqe firraa dhiquu fi firraa haquuf osoo saba biraa hin tuqin sirna isa miidhee fi gabrummaa jalatti isa hidhe diiguuf kaleessaas qabsaawaa ture, arraas cichee qabsaawaa jira, fuula duraas hanga walaba bahutti qabsoo isaa daran finiinsuun itti fufa.
Sabni Oromoo kun saba hayyummaa fi gamnummaan guuttee irraan baleeyxee ifiif mitii ambaafuu geessu, saba obsi isaa gowwaa fakkeesse, gara laafummaan isaa sodaataa fakkeesse, duuyda bal'inni isaa dhamaayyuu fakkeesse tahuus sabni kun saba qaroomaa fi tahuu gannoota dhibbaa fi walakkaa oliif rogoota adda addaan mirkaneessullee cubboonnii fi sobdoonni gaariin isaan himuu hin dandeenye. Hin dandeenyees osoo hin taane dhugaa saba kanaa ibsuu waan hin barbaanneef hunxuxatti dhooysanii kaayan. Jaarraa tokkoo fi walakkaa oliif ibidda gabrummaa keessatti mudhuraa fi tortoraa turellee qabsoo dhiisee harka maratee guyyaa tokkoof mana hin oolle, dirra lafa kaayee diriirfatee hin bulleesi. Qabsoo kanaan dura qabsaa'aa turettis, kan amma itti jiruu fi fuula duratti godhu keessattiis garuu mirga isaa kan dhabe deebifachuuf malee mirgoota sabootaa fi sab-lammoota biraa qabatamaan sarbuu, darbuu, dhiituu fi dhiibuu dhiisii sa'aa takkaaf niin godha ja'ee sammutti imaammatee hin beeku. Oromoon, eega gaafa lafti isaa Oromiyaan sirna badaa habashootaatiin koloneeffatamtee, qabeenyi hireef hirmaata isaa tahe saamamaa, mirgaa fi eenyummaan isaas dhiitamaa, namummaan isaa gabroomaa turullee sirnaatu na miidhe jechuun sirnicha irratti qabsaa'uu malee saba biraa dhiisii kan sirnoonni buttuun dhiiga dhuuyduu fi foon mogoltuun keessaa bahan sanuu ija hamtuun laalanii hin beekan. Oromoon mirga isaa falmachuuf qabsoo godhu keessatti ilmoo caraa takkattuu bu'ee nama tokkos miidhee hin beeku.
Haa tahuu garuu "Obsa baayy'ate gowwaan sodaa seha" akkuma ja'an san shira gara bal'iinaa fi obsa qabaatiinsaan Oromoon bira dabru mara diinnan isaa kan dur irraa jalqabee hanga quxusuu saanii wayyaaneetti gowwummaa itti fakkaatee shira danuu qabsoo Oromoo sakaaluuf yero yeroon xaxaan. Nutiis shira isaan nuun kuffisuuf daandii qabsoo Oromoo irra labbaa galchan faantoo godhannee irraan tarkaanfachaa as geenye. Ciminni keenya ambaaf hin mul'atu malee, mul'atuus hin dubbatu malee injifannoo gurguddaa galmeessaa jirra. Keessattuu quxisuun koloneeffataa, diinni guddaan Oromoo Wayyaaneen gaafuma biyya Oxoophiyaa tana qabatte irraa jalqabee hanga arraa wayta qabsoo fi warraaqsi Oromoo finiinu cufa diraamaa gosa adda addaa hojjachaa turuun ni yaadatama. Garuu wanti diraamaa wayyaaneen qabsoo Oromoo ittiin laamsheessuuf hojjattu durii hanga ammaa 'Mata Duree' diraamootaa malee qabiyyee fi qadiyyeen keessoo diraamicha guutumatti wal fakkaachuu isaati. Narratti barama jattee shakkuu dhabuun isii doofummaa wayyaanee mul'isullee garuu irra deddeebitee tooftaa fi tarsiimoo wal fakkaataan deemuun isii nama aarsa. Diraamaa wayyaaneen qabsoo Oromoo ittiin laamsheessuuf dalagaa turtee fi ammallee itti jirtu keessaa tokko saboota biraa Oromoo irratti kakaasuun walitti bu'iinsa hamaa uumuu dha.
Gaafa Oromoon mirga isaa falmachuu jalqabu gariin akka waan Oromoon mirga saboota biraa dhiibuuf qabsaawaa jirutti laalan. Garuu ummanni Oromoo eenyu akka tahan namni barana hin galleef waa'een Oromummaa umrii isaa guutuu hin galtuuf. Barana ummanni Oromoo shira wayyaanee fi kittillayyoo isii Abdi Illeen xaxameen ummanni Oromoo kuma dhibbaa ol naannoo Soomaalee tan mootummaa Xoophiyaa jalatti heeraa, alaabaa, mootummaa, tarsiimoo, lammummaa fi qajeelfama tokkoon bulan keessaa saniifuu lafa Oromiyaa tan duraniis shiruma wayyaaneetiin cittee dachuma isaanii irraa buqqaafamanii Oromiyaa keessatti facaafamanii jiran. Hunda osoo nagayumaan fidanii nuuf facaasanii irra wayyaa ture. Dubartoota keenya daa'imaa hanga manguddootti haala suukaneessaan gudeedaman. Gudeedamanii nagayaan gad hin lakkifne. Ibiddaan qaama gugguban, sibiilaan qaamaa fi nafa saala isaanii cicciranii, kaaniis ajjeessan. Haadhaaf ilmoo malqa addaan facaasanii gara jabummaan garaa waa dhale boochisan. Jaarsa ajjeessanii haadha manaa itti taphatan. Hedduu tuman, akka malee reeban, guyyaa meeqaaf garaa agabuu manneen hidhaa keessatti ugguranii waan ilmi namaa namaa miti bineensa gaaraa irrattuu hin raawwanne irratti raawwatan. Qabeenya umrii isaanii guutuu horatan irraa harka duwwaa laqaaqamanii fuudhamuun akka shiftaatti darbaman. Maaliif akkana gootan? ja'anii eenyullee hin gaafanne. Inumaatuu kallattii qalbii isaanii bakka takkatti deebisuun ummata qabeenya isaanii irraa harka duwwaa baafaman kana deebisanii qubsiisuuf deeggarsa walitti qabuu finiinsuu malee namni kana nu godhan, san nu godhan ja'ee daqiiqaa tokko maalayaanii irratti hin gubne.
Lafti irraa buqqaafaman kun Saudi Arabiyaa, Suudaan, Yaman, ykn biyyoota biroo osoo hin taane, Naannoo Soomaalee Xoophiyaa keessaahi. Biyyi yeroo hedduu namoota seeraan ala biyyattii isaanii keessatti yoo argamte firraa nama darbitu Saudi Arabiyaa faa turte. Takkaa ammoo akka Naannoon Soomaalee tan Abdi Illeen hogganamtu tanatti tahe biyya ambaattuu mudatee hin beeku. Wanti nama dhibu ammoo shira kana harka caalu kan wayyaaneen xaxame haa jannuu malee warri Soomaalees fedhii ummata kana buqqaasuu qabaachuu isaanii agarra. Osoo fedhii akkasii qabaachu baatanii manguddoonni, jaarsooliin, abboottiin amantii, dura bu'oonnii gosootaa, hayyoonni, bakka bu'oonni hawaasa fi kkf marti eessa turan? Naannoo Soomaalee keessaa namni tokko kan shira kana mormu akkamitti dhabame? Waanuma fedhellee haa tahuu garuu shirri hamaan hangana gahu irratti raawwatameellee ummanni Oromoo gonkuma Soomaalee Oromiyaa keessa jirtu ija keessa laalee hin beeku. Ifiif ija keessa laaluu dhiisii kashlabbootaa fi ergamtoota wayyaanee kan akka waan Oromoon gocha hamaa Soomaloota irratti fudhatanii fakkeessuun shoorarkaa uumuuf bobbaafaman mara sakatta'anii, faana bu'anii shira hammeenya isaan raawwachuuf ka'an meeqa qabanii harkaa fashaleessan. Manguddoonni, abboottiin amantaa, abboottiin gadaa, qeerroo fi hawaasni Oromoo marti akka jerjeraan garii fi ergamaan garii tarkaanfii diinummaa akka hin fudhanne Soomaaloota Oromiyaa keessaa jiraatan, daldalatan eegaa turan, hanga ammaas waardiyaa tahanii eegaa jiran. Hanga ammaattiis sabni biraa kan sababa kanaan wal qabatee qeensi irraa caphe, baalli irraa bu'e hin jiru. Duriis Oromoo bineensa nama nyaatu fakkeessanii sammuu namayyuu keessatti kalaquuf yaala turan. Wayyaaneeniis eega aangoo biyyattii dhunfattee hanga arraa tooftaa jijjiirraa roga hedduun itti moggaasanii yaada afaanfaajjeessaa turan. Arraas ittuma jiran. Kana tahuus sabni Oromoo guyyaa tokkolleef shira itti xaxamaa ture kanaaf qabsoon injifachuun ala jibbaa fi tuffi warroonni gariin qabaniif kana xiiqii fi kulkaan baafachuu fi kafalachuuf takkaa hin yaalle. Kanaaf, warroonni maqaa cubbuu Oromotti maxansanii qabsoo Oromoo xureeysuu fi xiqqeessuun haa dhaabbatu. Yoo Oromoon qabsoo finiinsu mara warra Itoophiyaa diiguuf qindaawee sochoo'u jechuun maraatu, akka Oromoo waan biyya diigduu taatee.
Walumagalatti, Oromiyaan akkuma beekkamu Soomaalee qofa osoo hin tahin sabaa fi sab-lammii biyya Oxoophiyaa ja'amtu tana keessatti argamu maraaf duuyda bal'aa nyaachisee isaan qubsu, obaasee dheebuu baasu tahuun ifa galeessa. Saba Xoophiyaa keessa jiru 85 ol irraa kan Oromiyaa keessa hin jirre jechuuf natti ulfaata. Akka seenaan himuttiis kanuma dhugoomsa. Haa tahuu garuu waggaa dhibbaa fi soddamaa oliif sabni danuun saba Oromoo waliin Oromiyaa irra osoo xurii qeensaa irraa hin kaasin waliin jaalalaa fi kabajaan jiraachaa turan. Osoo sabni Oromoo utubaa nagayaa fi gaaddisa dadaa tahee saboota badii irratti raawwataniis tahee, kan nagayumaan itti dhufan kanaas inni tolaaf dadaan waliin jiraachuuf hayyamaa tahuu baatee isaaniis nagayaan jiraachuu hin danda'an turan. Arraas wayta ammaa kan wayyaaneen saboota mara Oromoo waliin walitti buusuuf mudhii hidhattee maraachutti jirtu kanaas Oromoon saba kamiyyuu maxxanfatanii jaalaluma kaleessaa saniin waliin jiraachaa jiran. Haqaa fi dhugaa Oromoon qabu, kabajaa fi ulfinni eenyuuf illee laatee waggaa dheeraaf waliin jiraataa jiruu, warri arra akka waan Oromoon jibba saboota biraaf qabuu fakkeessanii kalaquu barbaadan kun eessaa dhufan? Murni Oromoo fi saboota biraa waliin dha'uun siyaasaa isaanii tarkaanfachiisuu barbaadan illeen haa godhanii. Duuba warri Oromoo waliin jaarraa tokkoo fi walakkaaf jiraate kan gaarummaa, arjummaa, jaalalaa fi kabaja saba kanaa beeku faan akkamitti dharoota Oromoo irratti afuufamuu fi maqa balleessi akkanaa fudhatanii amanu? Oromoon gaafa mirga isaa falmatu mara, kan namaa tuquuf osoo hin taane gaafa haqa isaa barbaaddachuu qofaaf warraaqsa isaa finiinsu mara ija jibbaatiin maaliif laalama? "Nama dhiiga si obaase aanan obaasi!" ja'ee kan hamtuu fi shira irratti raawwatuullee tolumaa fi dadaan bira dabree waliin jiraachaa as gahan. Shira osoo inni arkuus tahee hin agarre kan irratti raawwatamu mara "Takkaa duraa fixaa, takkaa du'aa fixa" ja'ee goolabee bira dabruu beeka Oromoon. Lafuma isaa irratti kan inni namatti hin maqne, warrumma itti dhufu kanaan osoo miidhamuu dachii tahee obsaan jiraachaa ture ittiis jira. Kanaaf, yoo warroota uumamaan jibbaa fi balfa saba kanaa qaban tahe malee haqa isaan qaban kan dhooysu waan jiru natti hin fakkaatu. Sabni lafa isaa saamanii waggaa 150 oliif warruma isa saame san waliin nagayumaan jiraatu addunyaarra eessa jira? Namni kana hunda hin amanin barana hoo, kan shirri tamana hin qabne Naannoo Soomaaleetiin saba kana irratti wayta raawwatamu inni ammoo nagaya biyyatti eeguu fi mirga isaa falmachuma jira. Saba tokkollee itti bu'ee hin beeku. Sabni hangana obsu eessa jiraree? Oromoon kan falmachaa turee fi jiruus sirnoota malee sabootaa miti. Jibbi keenya sirnootaa malee sabootaa miti. Hundafuu namni barana kabajaa, naamusa, jaalala, hayyummaa, dhiirummaa, qarooma, ulfina, obsa fi eenyummaa Oromoo hin barin yoomillee hin baru.
"Sirna dulloomaa mara qabsoo keenyaan ni diigna!"
Posted by Hasan Ismail at 2:19 PM No comments:
Harrichi Wayyaane Haylamaaram galgala kana ibsa ra...
The TPLF army continues to cause death and destruc...
Seenaa gabaabaa Kantiibaa magaalaa Shaashamannee A...
Waliigaltee Hawaasawaa. mirgoota Oromoo fi haaroms...
Xalayaa banaa PMNO Obbo Lammaa Magarsaa bulchiinsa...
Konfaransiin Nageenyaa naannoo Soomalee waliin god...